पीपीई लगाएका बेला फोन उठाउन पाइन कारबाही भइसकेछ
प्रहरीलाई १०० रुपैयाँ दिएर प्रलोभनमा पार्न खोज्दा फन्दामा
काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञा : निजी सवारीमा जोर–बिजोर लागु हुने
कोरोनासम्बन्धी जनचेतना जगाउँदा डाक् पीपीई लगाएका बेला फोन उठाउन पाइन कारबाही भइसकेछ
काठमाडौं । कोरोनासम्बन्धी जनचेतना जगाउने एकजना डाक्टरलाई सरकारले कारवाहीस्वरुपम मन्त्रालयमा तानेको छ ।
टेकु अस्पतालमा १८ वर्षदेखि करारमा रहेका डा. शेरबहादुर पुनलाई कोरोनासम्बन्धी जानकारी मन्त्रालयले भन्दा पहिला सञ्चारमाध्यमलाई भनेको भन्दै कारवाही गरिएको हो ।
उनलाई मन्त्रालयबाट गरिएको फोन नउठाएको अर्को आरोप लगाइएको छ ।
बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा डा. पुनले कारवाहीबारे यसो भने–
बिहीबार मलाइ मौखिकरुपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा बोलाएका रहेछन् । त्यो कुरा अस्पतालका निर्देशक डा. साबले मलाई मन्त्रालयमा पठाइदिनू भन्नुभएको छ जानू भनेर भन्नुभयो । त्यो समयमा म अस्पतालमा पीपीई लगाएर बिरामी चेक गर्दै थिएँ । पीपीई लगाएको समयमा घरिघरी लगाउने फुकाल्न मिल्दैन । तर म त्यो दिन जान सकिन । आइतबार जाने तयारी गरेको थिएँ ।
उता शुक्रबार बेलुका नै पत्र आएछ । आफुले बोलाउँदा नआएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंखया मन्त्रालयले स्पष्टीकरणसहितको पत्र काटेको रहेछ । जनतालाई रोगका बारेमा जानकारी दिँदा स्पष्टीकरण नै दिनुपर्ने रहेछ ।
मैले पत्र भने अहिलेसम्म पढ्न पाएको छैन । पत्रमा के छ भनेर मलाइ आधिकारिक जानकारी छैन । तर, मैले अनौपचारिक रुपमा आएको जानकारीअनुसार मैले मिडियामा गरेका कुराकानीसँग सम्बन्धित विषय पत्रमा उल्लेख गरेको बुझेको छु । कोरोना महामारीमा सुरुदेखि नै खटिइरहेको छु ।
अहिलेको महामारीको समयमा सबै मिलेर महामारीसँग लड्ने समयमा पत्र काटेर स्पष्टीकरणको लागि बोलाएको छ । मैले अस्पतालको बारेमा कहिलै यस्तो भयो उस्तो भएको छ भनेर भनेको छैन ।
मैले आफ्नो विशेषज्ञताको हिसाबले पनि जनतालाई जनचेतना दिने हो त । मैलै मिडिया पनि कुनै सरुवा रोगका बारेमा यसका यस्ता लक्षण देखियो भने हामीले यो रोगका बारेमा यसरी जोगिनुपर्छ भन्ने तर गरेको छु तर अहिले मलाई मिडियामा यस्ता बोलेको भनेर स्पष्टीकरणको पत्र पठाएको छ । मैलै रोगका बारेमा बोलेरै जनचेतना जगाएर कुनै नराम्रो त गरेको जस्तो लाग्दैन ।
मिडियाका साथीहरुले क्लिनिकल उपचारका साथै रोगको अनुसन्धान पनि गरिरहेको भएकाले रोगका बारेमा प्राविधिक कुरा सोध्नुहुन्छ, मैले त्यही बताउने हो । अहिले कोरोना रोग आयो त्यसबाट कसरी बच्ने भनेर पो मिडियामा बोेलेको छु । गतवर्ष डेँगुका बारेमा जनचेतना फैलाउँदै उपचारमा खटिएको थिएँ ।
अहिले देशैभर कोरोना परीक्षण र्‍यापिड टेष्ट किटबाट भइरहेको छ । मैले आरडीटी र पीसीआर दुवैको फाइदाका बारेमा जानकारी गराएको मात्रै हुँ । जुन यहाँहरुको मिडियामा पनि भनेको छु । मैले जापानमा राम्रो अवसर पाएको थिएँ । त्यो अवसर छोडेर आफ्नै देशमा केही गरौँ भनेर आएको थिएँ । क्लिनिकल उपचारका साथै रोगको अनुसन्धान पनि गरिरहेको हुन्छु ।
रोगका बारेमा आफुले गरेको अध्ययन र अनुसन्धानका साथै अन्य देशका अनुसन्धान हेर्ने पढ्ने गर्छु । तर आफुले जानेका जानकारीहरु अरुलाई दिँदा केही कुरा गलत गरेँजस्तो मलाई लाग्दैन । मैले जहिल्यै जनचेतना दिनका लागि लेख्ने र बोल्ने गरेको छु । केहि पाउँला भन्ने आशले त मैले कहिल्यै सोचेको छैन ।
(मिडियामा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै शुक्रबार मन्त्रालयले पत्र लेख्दै उनीसँग स्पष्टीकरण सोधिएपछि बाह्रखरीले यसै सन्दर्भमा डा. पुनसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
काठमाडौं । सिन्धुलीमा प्रहरीलाई १०० रुपैयाँ दिई आर्थिक प्रलोभनमा पार्न खोजेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा महोत्तरीको बर्दिबास... १० मिनेट पहिले
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा अझै एक सातादेखि १० दिनसम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने तयारी गरिएको छ । यसका लागि काठमाडौं, भक्तपुर... २२ मिनेट पहिले
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिका–५, पर्श्याङ, धारापानीमार्गमा डेरा गरी बस्ने धादिङका ३० वर्षीय जितबहादुर गुरुङको कोठामा तास खेलिरहेका गुरुङसहित नौजनालाई प्रहरीले... ३७ मिनेट पहिले
हेलम्बु । असार १ गते साँझबाट मेलम्ची नदीमा आएको भीषण बाढीले हेलम्बु क्षेत्र तहसनहस पार्‍यो । मेलच्ची बजारसम्म आइपुग्दा धेरै जनधनको... १ घण्टा पहिले
विराटनगर । वनको कर्मचारी र पत्रकार हौँ भन्दै धाकधम्की दिएर फर्निचर व्यवसायीसँग रकम असुली गर्ने दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको... १ घण्टा पहिले